Raha ny fanazavan’ny lehiben’ny voamieran’ny fandriampahalemana ao an-toerana dia efa tamin’ny volana febroary no nokitikitihan’io raikeliny io ity zazavavy ity. Tsy naharitra ilay zaza dia nanaiky ihany, ka nitondra vohoka. Nanomboka nangotraka ny toe-draharaha tao an-tokantranon’izy ireo ka lasa nitsoaka ilay rangahy. Nilaza ny marina tamin-dreniny sy ireo tompon’andraikitra eo anivon’ny fokontany misy azy mantsy ilay zazavavy, ka ireto farany, niaraka tamin’ny mpitandro ny filaminana, no nanao ny fikarohana an’ilay raikely nahavanon-doza. Tany Brickaville vao tratra ity farany ka nentina avy hatrany teo anivon’ny polisy misahana ny zaza tsy ampy taona. Fotoana fohy taorian’izay dia niakatra fampanoavana ny lehilahy ary efa mamita ny saziny eny amin’ny fonjaben’Antanimora ankehitriny.